ट्रम्प समर्थक ७० हजारको ट्वीटर सस्पेन्ड – NepalajaMedia
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकमध्ये ७० हजार जनाको ट्वीटर खाता सस्पेन्ड गरिदिएको छ ।
संसदमा आक्रमण गर्न लगाएपछि विश्वभरबाट आलोचना खेपिरहेका ट्रम्पका समर्थकको ट्वीटर खाता तत्कालका लागि निलम्बनमा परेका हुन् । ट्रम्पको पक्ष लिँदै क्युएननका समूहका सदस्य तोडफोडमा उत्रिएका थिए । ट्वीटरले ट्रम्पको अवैध गतिविधीमा समर्थन गर्ने र ट्रम्पलाई फाइदा पुग्ने गरी अनेक षडयन्त्र गर्दै संसदमा आक्रमण गर्न अग्रसरता देखाएर अनर्गल पोस्टहरु गर्न थालेपछि उनीहरुको खाता बन्द गर्न बाध्य हुनु परेको जनाएको छ ।
क्युएननका एउटा कन्स्पिरेसीमा आधारित अभियान हो । जसका सदस्यहरु अमेरिकाको क्यापिटोलमा रहेको संसदमा आक्रमण गर्न पुगेका थिए। यही अभियानका सयौं मानिसहरुलाई संसदमा पहिचान गरिएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्साहटमा संसदमा आक्रमणमा उत्रिएका कतिपयले क्यू लेखिएको ब्यानहरु पनि बोकेका थिए।
क्युआएननका अभियन्ताहरु राष्ट्रपति ट्रम्पलाई हिरो मान्छन्। मुलत क्युएननका राष्ट्रपति ट्रम्पले छेड्नसक्ने गोप्य युद्धको तयारीका लागि बनेको संगठित समूह हो । जसले आफूलाई सरकार, मिडिया र उद्योगका क्षेत्रमा रहेका खराबहरु विरुद्ध लड्ने दाबी गर्छ। यो यस्तो षड्यन्त्रको आधारमा तयार भएको संगठन हो जसभित्र केही यस्ता दाबीहरु पनि छन् जुन भुसको आगो जस्तै फैलिरहेको छ।
यतिसम्म कि यो समूहले यस अघि ट्रम्पसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई पक्राउ र कारवाही गर्नेसम्मका हल्ला फैलाएको थियो। अज्ञात रुपमा फैलाइने यिनै हल्लाहरुको आधारमा यसको जन्म भएको बताइन्छ। साथै यस भित्रका तथ्यहरुमा कति पत्याउन लायक छन् त कति छैनन्।
Prevभैँसी चोरेर फरार व्यक्ति २४ बर्षपछि पक्राउ
Nextमृत अवस्थामा भेटियो भालेबाघ
चीनले २०२० मै कोभिड-१९ खोपको ६१ करोड मात्रा उत्पादन गर्ने !
पत्रिकामा बेरिएका खानेकुरा खादा क्यानसरको खतरा
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (7030)
Breaking News: अचानक भर्खरदेखी काठमाडौंका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (1381)
नेपालमा पहिलोपटक एकै दिन कोरोनाले छ जनाको मृत्यु (1216)
आ’फ्नै जीवनमा आधारित यति मिठो गीत रेकर्ड ग;राए अर्जुनले ..( भिडियो हेर्नुहोस् ) (1154)
काठमाडौँको एक निजि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई १२ दिन राखेको बिल आयो २६ लाख तर बाचेन बिरामी, पैसा दिएपछि मात्रै सेनाले शव लैजान पायो (1086)
मलेशियामा सुरक्षा गार्ड कुट्ने सुपरभाइजरद्वारा आत्मसमर्पण, कुट्ने कुटाइ खाने दुवै नेपाली (1065)
काठमाडौंको जग्गाको मूल्याङ्कन बढेन, ललितपुरमा प्रति आना १२ सय ! (1034)
कोरोनाका बिरामीले भरिएको अस्पतालमा आज अचानक भयानक आगलागी, ८ जनाको मृ त्यु (1003)
११ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि काठमाडौको यो क्षेत्र सिल (957)
काठमाडौँका तीन क्षेत्रमा लकडाउन (949)
आफ्नै श्रीमतीलाई पिसाब खुवाउदै ८/१० जना गुन्डालाई मध्यरातमा पठाए।श्रीमतीको बिजोग,( हेर्नुहोस भिडियो )
श्री मानको अ वैध स’म्बन्ध श्री मतीले थाहा पाएपछि बी च सडकमा ह’,त्या
जन्मजात नै अपांग बालबालिका जन्मने कारण र बच्ने उपाय